Apple weputara nsụgharị ikpeazụ nke macOS Sierra 10.12.2 | Esi m mac
Taa ọ dịịrị ndị ọrụ Mac ịnata ọhụụ ọhụrụ nke macOS Sierra 10.12.2, ma ndị ọrụ Apple nsụgharị ndị ọzọ amalitela ụnyaahụ: iOS, watchOS, na tvOS. Na mkpokọta, anyị enweghị ike ịsị na ọ bụ mmelite pụtara ìhè n'ihe gbasara akụkọ, mana ọ ga-eburịrị n'uche mgbe niile na nkwụsi ike nke usoro a kawanye mma ma dozie nsogbu ndị achọtara na nsụgharị gara aga.
Na nke a a ndepụta na ndozi emejuputa maka MacBook Pro na-agbakwunyere Na ụdị ọhụrụ a nke macOS Sierra 10.12.2:
Mma Auto Kpọghe ntọlite ​​na ntụkwasị obi
Na-agbakwunye nkwado maka ịme nseta ihuenyo nke Touch Bar na-eji ngwa Grab ma ọ bụ Cmd-Shift-6
Na-edozi esemokwu nke mere ka emetụ Touch Bar emoji ghara igosi
Na-edozi nsogbu nke na-egbochi Nchedo Iguzosi Ike n'Ezi Ihe na ụfọdụ MacBook Pros
Melite ntọala na ahụmịhe iji wepu aha na ọrụ nke iCloud
Fixes otu nsogbu na nnyefe nke ihe nchekwa echekwara
Ọ na-aka mma ọdịyo dị mma mgbe ị na-eji ya Siri na FaceTime na ekweisi Bluetooth
Foto kwụsie ike ndozi
Na-edozi esemokwu na ozi email abata na-apụtaghị mgbe ị na-eji akaụntụ Microsoft Exchange
Edozi nsogbu nke gbochiri nwụnye Safari Extensions ebudatara na mpụga Safari Extensions ndepụta
Na-agbakwunye nkwado maka nrụnye ọhụrụ nke Windows 8 na Windows 7 iji Boot Camp na Macs akwado
Na mgbakwunye na ndepụta nke ndozi ahụhụ egosiri n'elu, na nke a tinye Emoji ọhụrụ na anyị ahụwo na ndị ọzọ nke sistemụ arụmọrụ ewepụtara n'ehihie ụnyaahụ. Ọ na-emekwa ka ọrụ mmeghe ahụ ka mma site na Apple Watch ma na-edozi akụkọ nke "mkpọka" na ọhụrụ MacBook Pro 2016 metụtara eserese.
Na mkpokọta okwu, ihe na-atọ ụtọ banyere mmelite Apple bụ na ha na-abata mgbe niile ma na-adịgide adịgide, yabụ ha na-adịkarị mezie ụfọdụ nsogbu ndị na - ebilite ma chọpụta na ụdị beta. Agaghị echeta ụdị ọhụrụ a nke macOS Sierra 10.12.2 maka atụmatụ ọhụrụ ọ na-etinye, mana ọ dị mkpa ka emelitere Mac gị iji mezie ndozi ndị a niile.
Versiondị ọhụrụ ahụ yana AirPod ọhụrụ ndị amalitere na weebụsaịtị Apple dị ugbu a maka ndị ọrụ niile. Cheta na ị chọrọ naanị Nweta Mac App Store wee pịa mmelite taabụ iji budata ya.
Ugbu a, anyị nwere sistemụ niile ruo oge, anyị ga-echere beta mbụ ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » MacOS Sierra » Apple weputara nsụgharị ikpeazụ nke macOS Sierra 10.12.2
Nnukwu ntụgharị akpaka nke mgbanwe
Photoshop maka Mac ugbu a dakọtara na Ogwe aka nke MacBook Pro ọhụrụ